ENGLISH FOR SUCCESS: October 2012
Plenty က တကယ်တော့ Noun (နာမ်) ပေါ့။ သူက အရေအတွက် အများကို ညွှန်းချင်တဲ့ အချိန် သုံးတယ်။ တကယ်လို့ Adjective (နာမ၀ိသေသန) အနေနဲ့ သုံးရင် Plentiful ဆိုပြီး သုံးရတယ်။ ဥပမာလေး ကြည့်လိုက်ရင် ပိုရှင်းသွားမယ်။
E.g., John had plenty work to do.
ဒီဥပမာလေးမှာ Plenty ကိုသုံးထားတာ မှန်ပေမယ့် "of "ဆိုတဲ့ Preposition မပါတဲ့ အတွက် သဒ္ဒါ မမှန်ဘူးဆိုရမယ်။ တကယ် အမှန်သုံးသင့်တာက
John had plenty of work to do.
Plentiful ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီ ဥပမာ မှာ Plentiful ဆိုတဲ့ Adjective ကို သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Died and Dead ကိုလဲ တော်တော်များများ မှားသုံးတတ်ကြသေးတယ်။ ပထမတစ်ခုက Past Tense and Past Participle ဖြစ်လို့ သူ့ကို အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောမယ့် အချိန်နဲ့ Passive Sentences တွေမှာ သုံးတယ်။ Dead ကကျတော့ Adjective အနေနဲ့ သုံးရတာပါ။ ဒါဆို ဒီစာလုံးတွေကို စာကြောင်းတွေမှာ ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ? အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ဥပမာလေးတွေကို ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။
E.g., 1. His grandfather died yesterday.
2. His grandfather is dead.
E.g., 1 and2နှစ်ခုလုံးက မှန်နေတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ မှားတတ်ကြလဲ ကြည့်ရအောင်။ များသောအားဖြင့် သတိထားမိတာက Eg 1 မှာ ပြထားတဲ့ died နေရာကို
His grandfather was died yesterday. ဆိုပြီး မှားသုံးတတ်ကြတယ်။
Posted by Chaos at 2:52 AM 1 comment:
Yes တို့ No တို့ ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ စကားလုံးတွေထဲက အပါအဝင်ပါ။ တစ်ဖက်လူက ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကို သဘောတူတယ် မတူဘူး ဆိုတာကို Yes သို့မဟုတ် No နဲ့ ပြောကြရတာပါပဲ။ အကြောင်းသင့်လို့ မြန်မာဘာသာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်ခုမှာ ဟုတ်ကဲ့၊ ဟင့်အင်း ပြောပုံ မတူတာလေး ပြောပါရစေ။ ဥပမာပေါ့ဗျာ။ မောင်ဖြူဟာ မနေ့က ကျောင်းကို သွားခဲ့တယ်။ အဲဒါကို မောင်မဲက သိချင်လို့ မေးတယ်ဆိုပါစို့။
မောင်မဲ - မနေ့က မင်း ကျောင်းသွားသလား။ လို့ မေးရင်
မောင်ဖြူ - ဟုတ်ကဲ့၊ သွားပါတယ်။ လို့ ဖြေမယ်။
မောင်မဲ - မနေ့က မင်း ကျောင်းမသွားဘူးလား။ လို့ မေးရင်
မောင်ဖြူ - မဟုတ်ဘူး၊ သွားပါတယ်။ လို့ ဖြေလိမ့်မယ်။ ကဲ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဘာကွာသလဲ ဆိုတာ သိရအောင် ကျနော် အင်္ဂလိပ်လို မေးဖြေလုပ်ပြမယ်။
A : Did you go to school yesterday?
A : Didn't you go to school yesterday?
B : Yes, I did. (No, I did လို့ ဖြေလို့ မရဘူး)
ကဲ ဘာထူးသလဲ သတိထားမိလား။ မြန်မာစာမှာက မေးခွန်းတစ်ကြောင်းလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ် မူတည်ပြီး Yes/No ဖြေတယ်။ မောင်မဲရဲ့ ဒုတိယအမေးဟာ မှားတဲ့အတွက် မောင်ဖြူက ဟင့်အင်း ဆိုပြီး ငြင်းပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာကြတော့ တစ်ကြောင်းလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို မယူတော့ဘူး။ ရိုးရိုးမေးခွန်လား (Did you?)၊ အငြင်းမေးခွန်းလား (Didn't you?) ဆိုတာ ခဏ မေ့ထားတယ်။ ကျောင်းသွားခြင်း၊ မသွားခြင်းကိုပဲ အဓိကထား ဖြေတယ်။ ကျောင်းမသွားဘူးလားလို့ မေးပေမယ့် ကျောင်းသွားတာ မှန်တယ်တဲ့အတွက် Yes လို့ပဲ ဖြေရပါတယ်။ အဲဒါကို လူအတော်များများ မှားကြတယ်။ ကျနော်လည်း ငယ်ငယ်က သောက်သောက်လဲ မှားခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် လေ့လာမှ ကွာမှန်း သိလာရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ "သွားလား" လို့ပဲ မေးမေး၊ "မသွားဘူးလား" လို့ပဲ မေးမေး၊ သွားရင် Yes မသွားရင် No လို့ ဖြေရုံပါပဲ။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ပြင်သစ်စာမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ရိုးရိုးအမေးကို ထောက်ခံချင်ရင် (Oui) (အွီ) လို့ ဖြေပြီး အငြင်းမေးခွန်းကို ထောက်ခံချင်ရင် (Si) (စီ) လို့ ဖြေရတယ်။ သဘောကတော့ Yes နှစ်မျိုး ရှိတဲ့ သဘောပေါ့။ အင်္ဂလိပ်မှာတော့ Yes က တစ်မျိုးတည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို မမှားရအောင် အရင်ဆုံး ပြောပြရတာပါ။ Yes နဲ့ No များ ဘာခက်တာမို့လို့ ဆိုပြီး အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။
ဒါဆို Yes မြင်တာနဲ့ သဘောတူတယ်လို့ ယူပြီး No မြင်တာနဲ့ ငြင်းတာပဲလို့ ယူဆလို့ ရနိုင်ပါ့မလား။ အဲဒီလို ယူဆလို့ မရတဲ့ အခြေအနေတချို့ကို တင်ပြပါ့မယ်။ အငြင်းနဲ့ ထောက်ခံလို့ ရတဲ့ အနေအထားတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကြည့်ကြစို့။
A : It isn't fair.
B : No, it isn't.
ကဲ ... အထက်က စာကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြစို့။ အေ ပြောလိုက်တာက ဒါ မတရားဘူး လို့ ပြောတယ်။ ဘီရဲ့ အဖြေက ရုတ်တရက် No ကို မြင်တော့ မြန်မာအတွေးနဲ့ ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် "မဟုတ်ဘူး၊ မတရားဘူး" လို့ ပြန်မိတတ်ကြတယ်။ အဲဒီ စာကြောင်းရဲ့ ဘာသာပြန်အမှန်က "ဟုတ်တယ်၊ မတရားဘူး" လို့ပဲ ပြန်ရလိမ့်မယ်။ အရှေ့စာပိုဒ်မှာ ကျနော် ရှင်းပြခဲ့သလိုပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ အကြောင်းရပ်ကို အဓိကထား စဉ်းစားပြီးမှ အဖြေဖြေတယ်။ တရားသလား မတရားဘူးလားပဲ စဉ်းစားတယ်။ ဘယ်လို မေးထားသလဲဆိုတာ အဓိက မကျဘူး။ မတရားဘူးလို့ ယူဆတာကြောင့် it isn't လို့ ဖြေရတယ်။ မတရားတာကို ပြောလိုတာကြောင့် No လို့ သုံးရတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာအများစုက Yes, it isn't လို့ မြန်မာစာလိုတွေးပြီး ဖြေမိတတ်ကြတယ်။ သတိထားစရာပါ။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာမှာ No မြင်တိုင်း ငြင်းတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သေသေချာချာ မှတ်ထားပေးပါ။
တချို့ကျတော့ သဘောတူတာကို Yes တွေ No တွေ မသုံးဘဲ ပြန်ဖြေတတ်ကြတယ်။ that's right, that's true, I agree, sure စတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့လည်း သဘောတူကြောင်း ဖြေလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ
'She isn't usually late.' 'No, that's true.' ("ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါ အမှန်ပဲ" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။)
'It's worthatry.' 'I agree.'
'We can discuss it again tomorrow.' 'Sure'
တကယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဘာကြိုက်တယ်၊ ဘာထင်မြင်တယ် ဆိုတာကို သင့်အနေနဲ့ ထောက်ခံသဘောတူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ So do I သို့မဟုတ် I do too နဲ့လည်း ဖြေလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ
'I love it when it's still light at night.' 'Yes, so do I.'
'Anyway, I think Geoffrey'sanice name.' 'I do too.'
ဒီမှာ တစ်ခု မှတ်ရမှာက တကယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်က သူတို့ ဘာမကြိုက်ဘူး၊ (အဲဒီလို) ဘာမထင်ဘူး ဆိုတာကို သင့်အနေနဲ့ ထောက်ခံသဘောတူချင်ရင်တော့ Nor do I, Neither do I သို့မဟုတ် I don't either နဲ့ ပြန်ဖြေရပါမယ်။ ဥပမာ
'I don't approve.' 'Neither (or nor) do I.'
'I don't think it's necessary.' 'I don't either.'
တကယ်လို့ အားရပါးရ သဘောတူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ absolutely, quite သို့မဟုတ် exactly သုံးပြီး ဒီဂရီမြှင့်လို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ
'The police should try harder.' 'Yes, absolutely.'
'She's over-reactingabit.' 'You're absolutely right.'
တကယ်လို့ သဘောတူရမယ့် ကိစ္စမှာ မတူတတူလို အခြေအနေမျိုး၊ မတူချင်တူချင်နဲ့ တူရတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ (တစ်ဝက်တစ်ပျက် သဘောတူတာ) I suppose so သို့မဟုတ် I suppose not ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ
'It's the only way.' 'I suppose so.'
'It's notavery nice thing to say, is it?' 'No, I suppose not.'
တကယ်လို့ မရဲတရဲနဲ့ သဘောတူရမယ် ဆိုရင်တော့ I think so သို့မဟုတ် you're probably right ကို သုံးပြီး ပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ "ထင်တာပဲလေ၊ ဟုတ်လောက်ပါတယ်" ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဥပမာအနေနဲ့
'She's German isn't she?' 'I think so.'
အခု ပြောသွားသမျှက သဘောတူတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ဖြေရမလဲဆိုတာ စုစည်းပြီး တင်ပြသွားတာပါ။ နောက်နေ့မှ သဘောမတူဘူး ဆိုရင်ကော၊ ဘယ်လို သုံးနှုန်းရမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။
Posted by Phyoe Kyaw at 8:41 PM No comments:
Labels: PK, Practical Usage, Speaking
Infinitive ရှေ့တွင် To ထည့်ရန်မလိုသော အခြေအနေများ
Infinitive ဆိုတာ ဥပမာအနေနဲ့ (to) write, (to) read စတဲ့ ပုံစံတွေကို ခေါ်တာပါ။ သူက ရိုးရိုးကြိယာနဲ့ ဘာကွာသလဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ရိုးရိုးကြိယာတွေလို အချိန်ကာလကို မဖော်ပြနိုင်ဘူး။ ဆိုလိုတာက အတိတ်၊ အနာဂတ် စတဲ့ အချိန်ကာလကို မရည်ညွှန်းနိုင်ဘူး။ ငယ်ငယ်က သင်ထားခဲ့တာနဲ့ ပြောရရင် V2 တို့ V3 တို့ မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။ Infinitive တွေဟာ လုပ်ရပ်နဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုပဲ ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ infinitive အများစုဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ အရှေ့မှာ TO ပါရတယ်။ TO ပါမှ သုံးလို့ ရနိုင်မယ့် သဘောပေါ့။ ဥပမာ
It's nice to be sitting here with you.
The main thing is to stay calm.
ဒါပေမယ့် Infinitive အကုန်လုံးလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ချွင်းချက်အနေနဲ့ တချို့ နေရာတွေမှာ TO မပါဘဲ Infinitive ကို သုံးလို့ရတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။ အခု ဒီပို့စ်မှာ အဲဒီ အခြေအနေတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
(၁) Modal Auxillary Verb တွေရဲ့နောက်မှာ
Modal Auxillary Verb တွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ အများသိကြတဲ့အတိုင်း will, would, shall, should, can, could, may, might, must စတာတွေပါ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က သင်ထားတဲ့အတိုင်း သူတို့ရဲ့ အနောက်မှာ Verb 1 လိုက်ရမယ်လို့ အများသိနေပြီးသားပါ။ အဲဒီ သိနှင့်ပြီးသား Verb 1 ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ Infinitive လို့ ခေါ်ပါတယ်။
I must go now. (I must to go now မဟုတ်)
Do you think she might be joking?
She will probably be elected.
I will have finished by tomorrow morning.
They would have won if they had playedabit harder.
တချို့ အခြေအနေတွေဟာ need, dare နဲ့ had better တွေရဲ့ နောက်မှာလည်း Infinitive ကို TO မပါဘဲ သုံးလို့ ရပါတယ်။
Need I do the washing up?
You'd better see what she wants.
အထူးမှတ်ရမှာကတော့ ought, used, be နဲ့ have တွေရဲ့ နောက်မှာ သုံးမယ့် Infinitive တွေကိုတော့ TO မပါဘဲ သုံးလို့ မရပါဘူး။ ငယ်ငယ်ကတော့ ought to, used to, be to, have to လို့ နဲ့ TO တွဲကျက်ထားတော့ TO ထည့်ဖို့ မမေ့တော့ဘူးပေါ့။
(၂) Let, make, see, hear, feel, watch နဲ့ notice တို့ရဲ့ နောက်မှာ
ကဲ ... ခေါင်းစဉ်မှာ ပြထားတဲ့ ကြိယာတွေရဲ့ အနောက်မှာ Infinitive ထည့်သုံးချင်ဆိုရင် TO ကို လုံးဝ သုံးစရာမလိုဘူးဆိုတာ မှတ်ထားရမယ်။ ဥပမာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
She lets her childern stay up very late.
(She lets her childern to stay မဟုတ်) (She lets her childern staying လည်းမဟုတ်)
I made them give me the money back.
We both heard him say that I was leaving.
Help, have နဲ့ know စတဲ့ ကြိယာတွေကတော့ တချို့အခြေအနေတွေမှာ TO မပါတဲ့ Infinitive တွေနဲ့ တွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ
Could you help me (to) unload the car? (to ကို ထည့်ချင်လည်းရတယ်၊ မထည့်ချင်လည်း ရတယ်)
Have Mrs Hansen come in, please. (US အသုံး)
I've never known him (to) pay foradrink. (Perfect Tense မြန်မာအခေါ် Verb3ဖြစ်တဲ့ known နဲ့ပဲ သုံးလို့ရပါတယ်)
အထူးမှတ်ရမှာက အထက်မှာပြခဲ့တဲ့ ကြိယာတွေထဲက (make, see, hear, help နဲ့ know) တွေကို Passive version ပုံစံနဲ့ ရေးပြီဆိုရင်တော့ TO သုံးကို သုံးရတော့မယ်။
He was made to pay back the money.
She was heard to say that she disagreed.
(၃) Why နဲ့ Why not ရဲ့ နောက်မှာ
တကယ်လို့ Why သို့မဟုတ် Why not နဲ့ စပြီး မေးခွန်းမေးမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အကြံပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အနောက်မှာ ထည့်သုံးကို Infinitive ကို TO မပါဘဲ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ ကြည့်ရအောင်။
Why pay more at other shops? We have the lowest prices.
Why sit down if you can lie down?
You're looking tired. Why not takeaholiday?
(၄) and, or, except, but, than, as နဲ့ like တို့ရဲ့နောက်မှာ
တကယ်လို့များ and, or, except, but, than, as နဲ့ like ကို ကြားခံသုံးပြီး Infinitive နှစ်ခုကို ဆက်ခဲ့ရင် ဒုတိယ Infinitive ကို TO ထည့်ပြီး ရေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
We had nothing to do except look at the cinema posters.
I'm ready to do anything but work onafarm.
It's easier to do it yourself than explain to somebody else how to do it.
It's as easy to smile as frown.
I have to feed the animals as well as look after the childern.
Why don't you do something useful like clean the flat?
Rather than ရဲ့ နောက်မှာလည်း ရံဖန်ရံခါ Infinitive ကို TO မပါဘဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Rather than wait any more, I decided to go home by taxi.
(၅) Do ရဲ့ နောက်မှာ
All I did was, What I do is စတဲ့ Expression တွေရဲ့ အနောက်မှာ Infinitive ကို TO မထည့်ဘဲလည်း သုံးလို့ရသလို TO ပါလို့လည်း ရပါတယ်။ ဥပမာ -
Posted by Phyoe Kyaw at 3:33 AM No comments:
Labels: PK, Practical Usage
Work က ရေတွက်လို့မရသော (uncountable noun) ဖြစ်လို့ s ထဲ့သုံးလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ကို Many, few အစရှိတဲ့ Plural (အများ) မှာ တွဲသုံးတဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ သုံးရင် မမှန်တော့ဘူး။
e.g., I have many works to do.
ဒီစာကြောင်းဟာ သဒ္ဒါ အထားအသို၊ သဒ္ဒါ စည်းကမ်းနဲ့ မညီပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား ရေတွက်လို့မရသော (uncountable noun) နဲ့ တွဲသုံးတဲ့ Much, little တို့နဲ့ သုံးမယ်၊ s ကိုဖြုတ်ထားမှသာ မှန်ပါမယ်။ ဒီလိုလေး သုံးလို့ရတယ်။ e.g., I have much work to do.
နောက်တစ်ခုကalot of ဆိုတဲ့ စကားစုက ရေတွက်လို့ရသော (countable noun)၊ ရေတွက်လို့ မရသော (uncountable noun) နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ တွဲသုံးလို့ ရတယ်။ Countable နဲ့ သုံးရင် s, es တွေ ထဲ့ပေးမယ်၊ Plural ကို ပြောင်းပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် Uncountable နဲ့သုံးရင် သူ့ Grammar Rule အရ s,es မထဲ့ပါဘူး။ ဒါကတော့alot of ရဲ့ သုံးပုံသုံးနည်းလေးပါ။
e.g., I havealot of things to do today.
I havealot of free time during these days.
ခုနက work အကြောင်းကို ပြန်ပြောရအောင်။ တစ်ချို့သော နေရာတွေမှာ works ဆိုပြီး သုံးနိုင်တယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေတွေလဲ ဆိုရင်.. စက်ရုံ (factory) နဲ့ သက်ဆိုင်သော ဒါမှမဟုတ် စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ တွေရဲ့ အနုပညာ လက်ရာတွေ အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကို Plural အနေနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။
e.g., The works of Shakespeare are remarkable.
ဒါကတော့ စာရေးဆရာရဲ့ လက်ရာတွေကို ပြောတဲ့ အနေနဲ့ သုံးထားတယ်။
e.g., The steel works could be seen from miles.
ဒီဥပမာလေးကတော့ စက်ရုံနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခြေအနေ၊ အရာဝတ္ထုတွေကို ညွှန်းတဲ့ အချိန် သုံးထားတာပါ။
ခုရေးတဲ့ စာတွေထဲက တစ်ခုခု မသိသေးတာကို ဖတ်မိသွားလို့ မှတ်မိသွားမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပီ.
Posted by Chaos at 10:00 PM No comments: